I-Cantera opal ifumaneka eMexico kwingxondorha eqhutywa yimbaleki - ividiyo
Thenga i-cantera opal yendalo kwivenkile yethu
I-Cantera opal ifunyanwa eMexico kwilitye lerhostela le-ryyolite. Kunzima ukususa i-opal kwi-rhyolite ngaphandle komonakalo. Ke, abanye i-gem cutters basika nje i-cabochon ye-ryyolite enefestile yomlilo opal kule dome. I-Cabochon enale ndlela yokusika yaziwa njenge-cantera opal.
ICantera lithetha "i -ryry" kwaye amatye anje avela kwi-Magdalena, Queretaro nakwezinye iindawo zaseMexico.
I-opal yomlilo yinto ebonakalayo ekuguquleni i-opal, enemibala efudumeleyo yomzimba etyheli ukuya kwiorenji ukuya kobomvu. Nangona ingahlali ibonakalisa nawuphi na umbala wombala, ngamanye amaxesha ilitye liya kubonakalisa ukukhanya okuluhlaza. Owona mthombo udumileyo womdlalo we-opals yimeko yeQuerétaro eMexico; ezi opals zihlala zibizwa ngokuba ziiopali zomlilo zaseMexico. Iipleyiti zomlilo ezingabonisi kudlala umbala ngamanye amaxesha zibizwa ngokuba zi-jelly anf cantera opals.
I-Girasol opal ligama ngamanye amaxesha ngempazamo nangokungafanelekanga isetyenziselwa ukubhekisa kwii-opals zomlilo, kunye nohlobo lwezinto ezingabonakaliyo zohlobo lwe-semitransparent uhlobo lwe-milky quartz evela eMadagascar ebonisa i-asterism, okanye isiphumo senkanyezi xa isikwe ngokufanelekileyo. Nangona kunjalo, i-opir ye-girasol yokwenene luhlobo lwe-opal hyalite ebonisa ukukhanya kwe-bluish okanye i-sheen elandela umthombo wokukhanya ojikeleze. Ayisiyo imibala yombala njengoko ubonwa kwi-opal, kodwa sisiphumo esivela kwi-microscopic inclusions. Ikwabizwa ngamanye amaxesha njenge opal yamanzi, nayo, xa ivela eMexico. Iindawo ezimbini ezibaluleke kakhulu zoluhlobo lwe-opal yiOregon neMexico.
Cantera opal intsingiselo
Ubomi obuphokelayo kwicala eliqaqambileyo: Ugcwele amandla okukhanya. Igqibelele xa ufuna ukubaleka ixesha lokuma okanye ithafa lobomi bakho. Kuya kufuneka ufumane ithuba lokuqonda ukuhamba kobutyebi.
Ukuphucula ubuchule bokusebenza: kugxininisa imibono emitsha. Iya kudala imisebenzi kunye neenkonzo ezitsala umdla wabantu. Ngumtsalane wethamsanqa oya kukwenza ube nempumelelo njengovulindlela ngexesha elitsha.
Rhoxisa iimvakalelo ezimbi kunye neengcinga: Icoca amandla aqokelelweyo acocekileyo. Iya kuthintela umxokelelwane wokungakhathali ukuba uqhubeke. Izisa umniniyo kwindlela eqaqambileyo.
I-Cantera opal evela eMexico
tags -qakathisa, yihakinto
tags Ukuthandabuza, yihakinto
tags yihakinto, Polymer, zokwenziwa